Al-Shabaab oo weerar qarax ku bilaawday ku qaaday degaanka Bacaadweyne - Awdinle Online
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa ay weerar ku bilaawday qaraxyo ku qaadeen Saldhigyo Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degaanka Bacaadweyne ee Koonfurta Gobolka Mudug.
Wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaal culus oo saaka Waaberigii soo gaaray uu ka dhacay degaanka Bacaadweyne, kaas oo u dhaxeeyay Ciidamada qeybta 21aad & Al-Shabaab, waxaana la sheegay in uu jiro khasaaro ka dhashay dagaalka.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in isgaasriinta degaanka Bacaadweyne ay hawada ka saareen Al-Shabaab oo Gudaha u galay degaanka Bacaadweyne, welina la maqlayo Gudaha degaanka rasaas xoogan.
Al-Shabaab ayaa Baraha Internet-ka ku baahiyay inay la wareegeen gacan ku heynta degaanka Bacaadweyne ee Koonfurat Gobolka Mudug, sidoo kale ay dagaalka ku qabsadeen illaa 5 gaari oo nooca dagaalka ah.
Saraakiisha Ciidamada qeybta 21aad iyo Madaxda Maamulka Galmudug weli kama hadlin dagaalka ka dhacay degaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug oo horay dagaalo uga dhaceen.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo shaacisay sababta ay dalka uga saartay Safiirka Kenya
Next articleHowlgal Dad & hub lagu qabtay oo laga sameeyay Beledweyne